UTim Cook ufumene ngaphezulu kwe- $ 100 yezigidi kulo nyaka | IPhone iindaba
Ukuba siyazicima iinyanga ezimbini ezidlulileyo zonyaka ophelileyo, singathathela ingqalelo ukuba uApple uphinde waba nonyaka omkhulu, kuba ezi nyanga zimbini zidlulileyo ziye zaba yintloko ebuhlungu kuTim Cook kunye neqela lakhe liphela, kuba bephumile kwingxaki ingxaki de kube kugqityiwe ingxaki yebhetri ebangela ukuba kuninzi ekuthethwa ngako.
Kodwa nangona kunjalo, iApple ibe nonyaka omkhulu kwezoqoqosho, kwaye ngokungothusiyo, abaphathi bayo abaphezulu bavuzwe ngayo. Ngokusengqiqweni, oyena ungenise eyona mali yayinguTim Cook, othe wagoduka ngaphezulu kwe-100 lezigidi zeedola, ngokukodwa i-102 yezigidi.
Ukuba sizaphula phantsi i-102 yezigidi, sibona indlela umvuzo kaTim Cook njengentloko ye-Apple ebengu-3.06 yezigidi zeedola ngelixa isixa seziphumo sasizizigidi ezingama-89,2 zeedola.
UTim Cook uye wangomnye wabantu ababaluleke kakhulu emhlabeni, ngenxa yesikhundla akuso kwaye ngenxa yokuba eyintloko yenkampani enexabiso eliphezulu kakhulu kwimarike yestokhwe emhlabeni, ke ngoko unalo iqela lezokhuseleko Ukulahla kwakhe.Kulo lonke u-2017 kuye kwaxabisa i $ 224.216. Uhamba ngenqwelomoya yabucala, onokuyisebenzisa kuhambo lwakho, iihambo zobuqu ezineendleko ze-93.109 zeedola.
Izandla zasekunene zikaTim Cook eApple: U-Luca Maestrai, uDan Riccio, uBrucee Sewell kunye no-Angela Ahrendts bafumene iibhonasi zeedola eziyi-3.11 yezigidi, nganye ngomvuzo wabo kubandakanya neenketho zesitokhwe bazuze malunga ne-24,2 yezigidi zeedola inye.
Kwingxelo yamva nje epapashwe yiApple, imali efunyenweyo ayichazwanga UMyili oyiNtloko, uJony Ive, obesebenza kule minyaka mibini idlulileyo kwiprojekthi yeApple Park, kwikomkhulu elitsha lika-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » UTim Cook wenze ngaphezulu kwe- $ 100 yezigidi kulo nyaka